सुदूरपश्चिममा क्षयरोगी मध्ये झण्डै ६ प्रतिशत बालबालिका !! | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिममा क्षयरोगी मध्ये झण्डै ६ प्रतिशत बालबालिका !!
सुदूरपश्चिममा क्षयरोगका बिरामीहरु मध्ये झण्डै ६ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् । कुल क्षयरोगका बिरामी मध्ये ५.६ प्रतिशत बालबालिका रहेका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका क्षय कुष्ठ अधिकृत मनोज ओझाले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक बर्षको पौष मसान्त सम्मको तथ्यांक अनुसार १ हजार २८२ जना क्षयरोगका बिरामी छन् ती मध्ये ७२ जना बालबालिका रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।सो तथ्यांकमा १४ बर्ष सम्मकालाई बालबालिकामा समावेश गरिएको ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार बैतडीमा १, दार्चुला, बाजुरा र डडेल्धुरामा २÷२, डोटी र अछाममा ३÷३, बझाङमा ४, कञ्चनपुरमा १३ र कैलालीमा ४२ जना बालबालिकामा क्षयरोग देखिएको क्षयकुष्ठ अधिकृत ओझाले जानकारी दिनुभयो ।
क्षयरोगका बिरामीहरुको सम्पर्क, कुपोषण लगायतका कारणले बालबालिकाहरुमा क्षयरोग देखिएको उहाँले बताउनुभयो । बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य र पोषणका बिषयमा ध्यान नदिएमा क्षयरोग जस्ता रोगहरु लाग्ने भएकाले यो बेला अभिभावकहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक बर्षमा सुदूरपश्चिममा १६० बालबालिका क्षयरोगका बिरामी थिए । चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा क्षयरोगी बालबालिकाको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक बर्षको पौष मसान्त सम्म सुदूरपश्चिममा ३९९ महिला क्षयरोगका बिरामी छन् । गत आर्थिक बर्षमा ८८१ जना महिला क्षयरोगका बिरामी थिए । नेपाल सरकारले क्षयरोगका बिरामीहरुलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ भने निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
२ हप्तामा वा लामो समय सम्म लगातार खोकी लागेमा, साँझ पख हल्का ज्वरो आउने लगायतका लक्षण भएमा क्षयरोग हुन सक्ने भएकाले नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा चेकजाँच गराउन पनि क्षयकुष्ठ अधिकृत ओझाले जानकारी दिनुभयो । नियमित रुपमा औषधि सेवन गरेमा क्षयरोग पूर्ण रुपमा निको हुने भएकाले यो बिषयमा सबैले जानकारहरु हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षयरोगको उपचार सफलता दर ९० प्रतिशत रहेको छ भने ४ प्रतिशतले औषधि उपचार पूरा नगरी बीचमै औषधि छोड्ने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा क्षयरोगी मध्ये ५ प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाएको छ । (भगीरथ अवस्थीले ninglashainionline मा लेखेका छन्)
अधिवेशनको अन्त्य गरेको घोषणासँगै निजामती प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र !!
यस्ता पांच कुराहरूले तपाईको घरमा आईपर्नलागेको संकटको संकेत गर्दछ !!
पहाड र तराईमा किन फरक दिन मनाइन्छ फागुपूर्णिमा र होली ?